Okuhle nezinzuzo zamathebulethi e-Amaril: bathini ngaye ngokubuyekezwa nokuthi bawusebenzisa kanjani umuthi? > Ukwelashwa nokuvimbela
Amatafula e-Amaryl: imiyalo yokusebenzisa, ukubuyekezwa, ama-analogues
Isenzo se-Pharmacological I-Glimepiride ibangela ukuthi ama-pancreas akhiqize kakhulu i-insulin futhi ayijikijele egazini. Ngenxa yalokhu, ushukela uyancishiswa, ikakhulukazi ngemuva kokudla. Esibindini, into esebenzayo i-oxid ngokubamba iqhaza kwe-cytochrome P450 IIC9. Izinkinga zingavela ngenkathi uthatha ezinye izidakamizwa ezilwela i-enzyme efanayo, njenge-rifampicin noma i-fluconazole. Kukhishwa ngama-60% isibindi bese ama-40% izinso.
Izinkomba zokusetshenziswa Thayipha isifo sikashukela sesi-2 - ezigulini okudla kuzo kanye nokuzivocavoca umzimba akusizi ngokwanele ukugcina ushukela wegazi ojwayelekile. Umuthi osemthethweni uthi i-glimepiride ingasetjenziswa ngokuhlangana nemijovo ye-metformin ne-insulin. UDkt Bernstein uthi lesi sidakamizwa siyingozi futhi kufanele sishiywe. Funda kabanzi lapha ukuthi kungani I-Amaryl iyingozi nokuthi ungayifaka kanjani esikhundleni sayo.
Ukuthatha i-Amaryl, njengamanye amaphilisi kashukela, udinga ukulandela indlela odla ngayo.
Contraindication Uhlobo 1 isifo sikashukela, i-ketoacidosis yesifo sikashukela, ikoma. Isibindi esibucayi nesifo sezinso. Ukungabambeleli kokuthile okusebenzayo kwe-glimepiride noma okunye okususelwa ku-sulfonylurea. Ukungondleki, ukungondleki okungajwayelekile, ukudla okungama-malabsorption emgodini wokugaya ukudla, ukunqunyelwa kokudla kwe-caloric kuya ku-1000 kcal ngosuku noma ngaphansi. Iminyaka engu-18.
Imiyalo ekhethekile Udinga ukuthi uqaphele nge-hypoglycemia. Funda isihloko esithi “Ushukela Ophansi (Hypoglycemia)” ngokucophelela. Hlola izimpawu zalokhu kuba nzima kokunakekelwa okuphuthumayo. Emavikini okuqala kokuphuza umuthi, i-glimepiride kungcono ukungawenzi umsebenzi odinga ukusabela ngokomzimba nangokwengqondo ngokushesha. Ukwelashwa kungakhuphula ubungozi bakho lapho ushayela.
Umthamo Umthamo ofanele we-Amaril unqunywe udokotela. Abantu abanesifo sikashukela akufanele bakwenze lokhu bebodwa. Umuthi uyatholakala kumithamo ehlukahlukene - amaphilisi we-1, 2, 3 no-4 mg. Thatha kanye ngosuku ngaphambi kokudla kwasekuseni noma kokuqala. Amathebulethi angahlukaniswa ngesigamu, kepha angatshekelwa, kufanele agezwe phansi ngoketshezi.
Imiphumela emibi I-Hypoglycemia (ushukela wegazi ophansi) umphumela ojwayelekile futhi oyingozi. Ezinye izinkinga azivamile. Lokhu kuhlanza isicanucanu, umuzwa wokugcwala kwesisu, isifo sohudo, ukumiswa kwesikhumba, ukuqhuma. Ukuzwela kwesikhumba elangeni kungakhuphuka, ukuntuleka kwe-sodium emzimbeni kungahle kukhule. Ngenxa yokuncipha okusheshayo koshukela wegazi, umbono ungakhula okwesikhashana.
Ukukhulelwa nokubeletha I-Glimepiride nezinye izinto eziphuma ku-sulfonylurea ngeke zithathwe ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa. Uma uhlangabezana noshukela ophezulu wegazi ngesikhathi sokukhulelwa, hlola izindatshana Zesifo Sikashukela Sikhulelwe kanye Ne-Gestational Diabetes. Ziphathwe njengoba kubhaliwe kuzo. Ungathathi noma yimaphi amaphilisi okwehlisa ushukela ngaphandle kwemvume.
Ukuxhumana neminye imithi I-Amaryl ingasebenzisana kabi namaphilisi okucindezela, izidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala neminye imithi eminingi ethandwayo. Funda kabanzi emiyalweni yokusetshenziswa, okukuphakeji nomuthi. Khuluma nodokotela wakho! Mtshele ngayo yonke imishanguzo oyiphuzayo.
Ukweqisa I-hypoglycemia eshubile, esisongela impilo ingahle ibe khona. Izimpawu zayo, izindlela zokwelashwa ekhaya nokwelashwa esibhedlela zichazwa lapha. Abantu abathi ngephutha noma ngamabomu abagwinye amatafula we-glimepiride noma okunye okutholakele kwe-sulfonylurea badinga ukunakekelwa okuphuthumayo.
Khipha ifomu, impilo yeshalofu, ukwakhiwa Umbala wamatafula e-Amaryl uhluka ngokuya ngomthamo. Ithebhulethi ne-element glimepiride 1 mg - epinki. 2 mg - luhlaza, 3 mg - uphuzi ophuzi, 4 mg - luhlaza okwesibhakabhaka. Ababekhona: i-lactose monohydrate, isitashi se-sodium carboxymethyl (uhlobo A), i-povidone 25,000, i-microcrystalline cellulose, i-magnesium stearate, kanye nodayi. Gcina ungatholakali ezinganeni ngamazinga okushisa angeqi ku-30 ​​° C. Impilo yeshelf iyiminyaka emithathu.
Ngezansi kunezimpendulo zemibuzo ebuzwa njalo yiziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
Ungayithatha kanjani i-Amaryl: ngaphambi kokudla noma ngemuva?
I-Amaryl ithathwa ngaphambi kokudla, ukuze isikhathi sokuqalisa ukudla kudliwe lapho kudliwe. Njengomthetho, udokotela uyalela oshukela ukuba athathe lo muthi ngaphambi kokudla kwasekuseni. Futhi uma isiguli singenayo isidlo sasekuseni, thatha iphilisi ngaphambi kokudla. Ama-analogu aqukethe i-glimepiride esebenzayo yezinto kufanele athathwe ngendlela efanayo.
Ungazami ukweqa ukudla ngemuva kokuthatha i-Amaril. Kufanele udle, ngaphandle kwalokho umuthi uzokwehlisa ushukela wegazi ngokweqile futhi kuzoba ne-hypoglycemia. Lokhu kuyinkinga enkulu engadala izimpawu zokuhlukahluka kobukhulu. Ukusuka ekukhathazeni kanye nasezenzakalweni zomzimba kuya ekhefeni nasekufeni. Ingozi ye-hypoglycemia ngesinye sezizathu zokuthi uDkt Bernstein angancomi ukuthatha i-glimepiride. Osetshenziselwa yikho ukwelashwa okuphephile futhi okusebenzayo kwesinyathelo-sinyathelo ngesifo sikashukela sohlobo 2.
Ngabe lo muthi uyahambisana notshwala?
Imiyalo yokusetshenziswa kwamacwecwe e-Amaril idinga ukuthi abanesifo sikashukela bahlukane ngokuphelele notshwala phakathi naso sonke isikhathi sokulashwa nalesi sidakamizwa. Ngoba ukuphuza utshwala kukhulisa ubungozi be-hypoglycemia nezinkinga zesibindi. Ukungakwazi kwe-glimepiride yezidakamizwa notshwala kuyinkinga enkulu. Ngoba umuthi isikhathi eside, esidonsa impilo yonke, futhi hhayi ngenkambo yesikhathi esifushane yokwelashwa.
Ngasikhathi sinye, iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ezingasebenzisi amaphilisi ayingozi futhi ziphathwa ngokwalolu hlelo azivunyelwe ukuphuza utshwala ngokusemandleni abo. Bheka isihloko esithi “Utshwala Bokushukela” ngemininingwane. Ungagcina ushukela ojwayelekile kahle futhi kwesinye isikhathi uzivumele ukuthi uphuze ingilazi noma ezimbili ngaphandle kokulimaza impilo.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi athathe lokhu?
Ngeshwa, akukho datha eqondile yokuthi isikhathi esingakanani ngemuva kokuthatha i-Amaril iqala ukwenza isenzo. Ushukela wegazi wehla ngangokunokwenzeka ngemuva kwamahora ama-2-3. Kungenzeka kakhulu, umphumela wesidakamizwa uqala kakhulu ngaphambili, ngemuva kwemizuzu engama-30-60. Ngakho-ke ungabambezeli ukuphuza ukudla ukuze i-hypoglycemia ingenzeki. Umphumela wethamo ngalinye elithathiwe le-glimepiride lihlala ngaphezu kosuku.
Yini engcono: Amaryl noma Diabeteson?
Yomibili le mishanguzo ifakiwe ohlwini lwezidakamizwa eziyingozi zesifo sikashukela sohlobo 2. Kungcono ukwenqaba ukuzithatha. Esikhundleni salokho, sebenzisa izindlela zokwelapha i-endocrin-patient.com ekhuthaza.
Zama ukujwayeza udokotela onqume i-Amaryl noma i-Diabeteson ngezinto ezisezweni. Umuthi woqobo, i-Diabeteson, ukwandise kakhulu ukufa kwabantu ezigulini abazisebenzayo. Ngakho-ke, isuswe buthule ekuthengisweni. Manje ungathenga amaphilisi kuphela i-Diabeteson MV. Benza ngobumnene ngokwengeziwe, kepha nokho bayalimaza.
Yini engcono ukuyiphuza: i-Amaryl noma i-Glucophage?
I-Amaryl umuthi olimazayo. Isayithi endocrin-patient.com izama ukukukhuthaza ukuthi wenqabe ukwamukela. IGlucophage enye futhi le ndaba. Lesi sidakamizwa sokuqala saseMetformin, okuyingxenye ebaluleke kakhulu yohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 ngesinyathelo. I-Metformin akuyona umuthi olimazayo, kodwa kunalokho ewusizo kakhulu. Ukulawulwa kwesifo sikashukela esihle, kufanele uqale ushintshe ekudleni okuphansi kwe-carb. Ukudla okunempilo kuyahambisana nokusetshenziswa komuthi i-Glucophage, futhi, uma kunesidingo, nakho ngemijovo ye-insulin kumithamo ephansi.
Ngingakwazi ukuthatha iYanumet ne-Amaril ngasikhathi sinye?
I-Amaryl namanye amaphilisi aqukethe i-glimepiride akufanele athathwe ngezizathu ezibalwe ngenhla. I-Yanumet umuthi wokuhlanganisa oqukethe i-metformin. Ngesikhathi sokubhala, kuyabiza kakhulu futhi akunazimbangi ezishibhile. Ngokuyinhloko, ungayithatha. Kepha ungazama ukushintshela kulo ususe ku-metformin emsulwa, okungcono kunazo zonke izidakamizwa ezingeniswa ezweni ezisetshenziswayo. Uma ukwazi ukwenza lokhu ngaphandle kokukhula ngokulawula ushukela, uzokonga imali enkulu njalo ngenyanga.
Ngesikhathi sokulungiswa kwe-athikili evela kuma-analogues angeniswa ezweni, kwakuthengiswa kuphela i-Glimepirid-Teva nguPliva Hrvatska, eCroatia ethengiswa emakhemisi. Ngaso leso sikhathi, i-Amaril inezindawo eziningi zaseRussia, ezingabizi kakhulu kunomuthi wokuqala.
I-Glimepiride I-Atoll, Pharmproject, Pharmstandard, Vertex
I-Glimepiride Canon I-Canonpharma
Umenzi ngamunye ukhiqiza zonke izinketho zemithamo ye-glimepiride - 1, 2, 3 no-4 mg. Bheka ukutholakala kwezidakamizwa kanye namanani emithi yemithi.
Isidakamizwa sokuqala i-Amaryl noma i-analogues eshibhile: okufanele ukhethe
Funda lapha kungani I-Amaryl nezimpawu zayo kuyingozi kungani udinga ukwenqaba ukuzithatha nokuthi yini engcono ukuyisusa. Isayithi i-endocrin-patient.com ifundisa ukuthi inganciphisa kanjani ushukela wegazi ibe yinto evamile futhi igcine izinzile ingajwayelekile ngaphandle kokuzila, ukuthatha izidakamizwa eziyingozi futhi ezibizayo, ngokujova imithamo emikhulu ye-insulin.
I-Amaryl M: umuthi wokuhlanganisa
I-Amaryl M umuthi wokuhlanganisa isifo sikashukela sohlobo 2. Inezithako ezimbili ezisebenzayo kwithebhulethi eyodwa - glimepiride ne-metformin. Njengoba ufunda ngenhla, i-glimepiride iyingozi futhi kungcono ukungayithathi. Kodwa i-metformin ayinabungozi nhlobo, kodwa ilusizo kakhulu kwabanesifo sikashukela. Lesi sidakamizwa sehlisa ushukela wegazi, sivikela ezinkingeni zesifo sikashukela, sisiza ukunciphisa umzimba futhi sandisa impilo.
Isiza endocrin-patient.com sincoma ukuthi uthathe i-metformin emsulwa esikhundleni se-Amaril M, umuthi wokuqala omuhle kakhulu yiGlucofage. Ubuye abe nozakwabo waseRussia, ashibhile kancane.
Iziphi izifaniso zamathebulethi e-Amaryl M?
I-Amaryl M yithebhulethi yokudibanisa equkethe izithako ezimbili ezisebenzayo: glimepiride ne-metformin. Zonke izidakamizwa, ezibandakanya i-glimepiride, ziyingozi. Bangehlisa amazinga kashukela egazini iminyaka eminingana, bese lesi sifo siphenduka uhlobo olubi lukashukela. Kwabanesifo sikashukela abaphathwa lawa maphilisi, ubungozi bokufa ngenxa yokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi abuncishisiwe, kepha kunalokho kwande.
Esikhundleni sokubheka i-analogues ye-Amaril M, shintshela ku-metformin emsulwa. Okuhle kunakho konke, umuthi ongenisiwe wokuqala yiGlucofage. Kusobala inekhwalithi enhle, futhi ngasikhathi sinayo intengo engabizi. Sebenzisa futhi uhlelo lwesinyathelo 2 nesinyathelo sokulapha isifo sikashukela. Uzokwazi ukugcina ushukela uvamile ngendlela evamile, njengabantu abanempilo, ngaphandle kokudla "okulambile" nokuzivocavoca okunzima komzimba.
I-Amaryl ibiza kakhulu kunamaphilisi ancintisanayo, isibonelo, iDiabeteson MV noma iManinil. Ngakho-ke, inani elincane labanesifo sikashukela liyakwemukela, futhi kunezibuyekezo ezimbalwa ngakho. Sebenzisa i-glimepiride ukulawula ushukela wegazi kudala imiphumela emibi yesikhathi eside. Zibhalwe ngaphezulu kuleli khasi. Ukubuyekezwa okuhle mayelana nomuthi i-Amaril kubhalwe ngabanesifo sikashukela abasithatha isikhathi esingaphezu kweminyaka engu-1-2 futhi abangakabi nesikhathi sokuzwa imiphumela emibi.
Odokotela abaningi bayazi ukuthi i-glimepiride ayinciphisi ukushona kweziguli ezinesifo sikashukela, kodwa basaqhubeka nokubeka lesi sidakamizwa ezigulini zabo. Iqiniso ngukuthi ezinyangeni zokuqala zokuthatha kahle i-Amaril yehlisa ushukela wegazi. Iziguli ziyaneliswa. Ayanyamalala emkhakheni wokubuka udokotela isikhathi eside, anciphisa umthwalo kuye. Esikhundleni sokuphuza amaphilisi ayingozi, funda irejista yokwelashwa ngesifo sikashukela sohlobo 2 bese uyisebenzisa. Le ndlela inika ithuba langempela lokuphila iminyaka endala kakhulu futhi ungakhubazeki.
6 ukuphawula ku-Amaril
Sawubona Ubaba wami uneminyaka engama-74, ukuphakama kube ngu-178 cm, isisindo esingu-72 kg. Unesifo sikashukela sohlobo 2 esivela ku-2013. Ekuqaleni kwalesi sifo, ushukela wegazi wafika ku-16 Udokotela wanquma iManinil 3.5 mg, ithebhulethi e-2 izikhathi 2 ngosuku. Enye i-endocrinologist ithe kwanele ukuthatha ithebhulethi elilodwa ngosuku, futhi saphathwa kanjena iminyaka eminingi, kuze kube muva nje. Ngo-2017, ushukela wehla amahlandla ama-4. Ngenyanga edlule, udokotela ukhansele iManinil futhi wanquma i-Amaril esikhundleni sakhe ngosuku. IGlycated hemoglobin yayingaphansi kuka-5%, kepha maphakathi no-Agasti 2017 yayivele isiyi-5.99%. Emavikini amabili edlule, ushukela kababa ekuseni esiswini esingenalutho ngu-7.5-8.5, kuthi ngemuva kokudla ngemuva kwamahora ama-2 ufinyelele ku-12. Sicela ululeke ukuthi kugcinwa kanjani izinkomba kujwayelekile? Ngiyabonga
Ngenyanga edlule, udokotela ukhansele iManinil futhi wanquma i-Amaril esikhundleni sakhe ngosuku.
Isithombo sehhashi asisiyabushukela. Zombili lezi zidakamizwa ziyingozi. Bona okwamanje banciphisa ushukela wegazi, kepha akukunciphisi ukufa kweziguli, kodwa kunalokho, bakwenyusa.
Ubaba wami uneminyaka engama-74, ukuphakama kube ngu-178 cm, isisindo esingu-72 kg. Unesifo sikashukela sohlobo 2 esivela ku-2013.
Kuyisimangaliso ukuthi uyihlo usaphila futhi ugcina uhlobo oluthile lomthetho. Abantu abanciphile futhi abanciphile i-Amaril, Maninil nezinye izidakamizwa eziyingozi ezifanayo bayiswa ethuneni ngokushesha kakhulu kuneziguli ezikhuluphele. Iminyaka engu-2-3 inganele. Uyihlo, njengoba ngikuqonda kahle, uthathe isikhathi eside uManinil.
Uyacelwa ukuthi weluleke ukuthi izinkomba zijwayelekile kanjani?
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 akulungile kuwe. Isiguli sinesifo sikashukela se-autoimmune, futhi hhayi ukuzwela kwezicubu okunciphile kwe-insulin, okwenzeka ngenxa yesisindo ngokweqile.
Udinga ukushintshela ekudleni okuphansi kwe-carb - http://endocrin-patient.com/dieta-pri-saharnom-diabete/ - bese ufaka i-insulin njengoba kudingeka, uqala ngale ndatshana - http://endocrin-patient.com/vidy-insulina /. Awekho amaphilisi kashukela okufanele aphuzwe yiziguli ezinciphile futhi ezacile, kufaka phakathi i-metformin (Siofor, Glucofage).
Sawubona, ngidinga izeluleko zakho! Umama wami (oneminyaka engama-69 ubudala, ukuphakama kwesisindo angazi, kuphelele) unesifo sikashukela sohlobo 2, usegule iminyaka emithathu. Ekuqaleni konke kwahamba kahle. Muva nje, udluliselwe kumatafula e-Amaryl. Kuthatha ekuseni ngo-4 mg, bese kuthi okunye kusihlwa kusihlwa. Kule modi, inyanga yesibili. Kepha akuzange kube ngcono, kepha ngalokho, impilo yakhe yaba ngcono. Kuleli sonto cishe nsuku zonke, ushukela osheshayo ongu-12-13. Ukhale ngokuthi ngemuva kokuphuza umuthi ekuseni, u-Amaryl uqala ukuthola ikhanda, noshukela alinciphile nakancane. Umbono sehlile. Silushintsha kanjani uhlobo lonyango? Ukuya kodokotela kukude kakhulu. Ngiyesaba ukuthi ngeke simyise esibhedlela.
Kuleli sonto cishe nsuku zonke, ushukela osheshayo ongu-12-13. Ikhala ngokuthi ngemuva kokuthatha umuthi i-Amaril ekuseni, ushukela awunciphi nakancane. Umbono sehlile.
Konke lokhu kusikisela ukuthi lesi sifo saphenduka uhlobo olubi lwesifo sikashukela. Isidingo esiphuthumayo sokuqala ukujova i-insulin, ngaphandle kwalokho omkhulu uzolahlekelwa ukwazi futhi afe.
Silushintsha kanjani uhlobo lonyango?
Bona impahla ekwelapheni isifo sikashukela asebekhulile - http://endocrin-patient.com/diabetes-pozhilych-ludej/. Njengomthetho, kusetshenziswa izikimu ezenziwe lula. Zama ukuqala imijovo ye-insulin ngokushesha ukuze ugweme ukukhubazeka kwesifo sikashukela. Akunakwenzeka ukuthi uzophumelela ukuthola ukuthi unyoko aphathwe ngokugcwele. Ngoba abantu asebekhulile bavame ukumelana noshintsho.
Sawubona Ngineminyaka engama-56, bengihlushwa isifo sikashukela sohlobo 2 iminyaka emi-4. Ngithatha u-Amaryl M kumthamo we-2 mg + 500 mg. Ntambama, ushukela awunakuba ngaphezulu kuka-8, kepha ekuseni ufinyelela ku-11-14 mmol / l. Ngizama ukulandela ukudla. Ezinyangeni ezisanda kwedlula, ukwazile ukulahlekelwa yi-7 kg. Ngibonile ukuthi uma ungadli isidlo sakusihlwa, kuyafana, izinga leshukela egazini ngakusasa elilandelayo lizoba likhulu kunasemini. Yeluleka ngokuthi ungayixazulula kanjani inkinga ngoshukela wasekuseni?
Yeluleka ngokuthi ungayixazulula kanjani inkinga ngoshukela wasekuseni?
Okokuqala, ngikweluleka ukuthi utadishe ngokucophelela izindatshana ezikulesi siza, bese ubuza imibuzo emazwaneni.
Njengoba kukhonjisiwe kwimiyalo, amaphilisi we-Amaril, ukubuyekezwa kwako okuhle kakhulu, kungokwesigaba samagama we-hypoglycemic. Isithako esikhulu esisebenzayo lapho umkhiqizo usekwe khona yi-glimepiride. Kungokwesizukulwane sesithathu, kususelwa ku-urea sulfonyl. Ngaphansi kwethonya le-compact emzimbeni, ukwakheka kwe-insulin kusebenze ngenxa yokulungiswa okusebenzayo komsebenzi wezakhi zamaselula wamanyikwe. Umphumela owengeziwe owandisa ukusebenza kahle kwesidakamizwa ukwanda kokuzwela kwezicubu ze-organic kuya ku-insulin. Ngokusho kochwepheshe, ukuthatha i-Amaril ngaphansi kokuqashwa kukadokotela oqeqeshiwe futhi ukulandela imiyalo kukuvumela ukuthi ufinyelele ngokulawula ushukela wegazi ogulayo.
Njengoba kubonakala kuzibuyekezo, "I-Amaril" (imiyalo yokusetshenziswa njalo ehambisana nomkhiqizo) iyathengiswa ngefomu lethebhulethi. Amakhandlela ahlanganiswa emabhulini aqukethe amaphilisi ayi-15. Ibhokisi elilodwa lamakhadibhodi lifaka ama-blisters amabili. Kunezinketho ezine: amaphinki apinki, aluhlaza (uhlobo lokuqala luqukethe i-compact esebenzayo ngenani le-1 mg, elesibili liqukethe ivolumu ephindwe kabili), ophuzi bama-milligram amathathu nohlaza okwesibhakabhaka. Kamuva, okuhlushwa kuphezulu kakhulu - 4 mg. Ngaphezu kwengxenye eyinhloko, kusetshenziswe izakhi ezithile ezingeziwe. Uhlu oluphelele lokuxhuma lubhalwe kwimiyalo.
Ukusebenza komshini womuthi emzimbeni womuntu kuboniswe kwimiyalo ye-Amarila (1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg). Inhlanganisela eyinhloko, ebizwa ngokuthi i-glimepiride, ingeyokuhlanganiswa kwezidakamizwa okusebenzayo kwesizukulwane sesithathu futhi ivusa umsebenzi owengeziwe wezakhi zamaseli we-pancreatic. Ngaphansi kwethonya lendawo, amaseli aphethe imisebenzi yokufihla akhiqiza i-insulin ngokugcwele. Ngasikhathi sinye, i-glimepiride inomphumela kwimicu yemisipha, ukwakheka kwamafutha, ukwandisa ukuthambekela kwe-hormone.
Umphumela wokuqala ochazwe ubizwa nge-pancreatic. Njengoba kukhonjisiwe kwimiyalo ye-Amarila (2 mg neminye imithamo), lo mphumela ulinganisele lapho uphuza umuthi, okusho ukuthi akukho bungozi be-hypoglycemia ngomthamo owanele womuthi. I-Glimepiride inciphisa ukumelana ne-insulin, ukuhlangana kwezingxenyana ze-atherogenic lipoprotein ohlelweni lokujikeleza kwezempilo kuncishisiwe. Igazi liba kancane viscous, ukucindezela oxidative kukhulunywa kancane.
I-Amarila Instruction (4 mg namanye amafomu womthamo) izoba nokukhonjwa ekuqinisekisweni kwe-bioavailability ngokuphelele kwesakhiwo esisebenzayo. Uma usebenzisa umuthi ezinqenyeni ezinconywe udokotela kanye nomenzi wazo, awukho umphumela wokuqongelelwayo obonakalayo. I-Glimepiride ohlelweni lokujikeleza ekugxilisweni okukhulu ibonwa ngemuva kwamahora angama-2,5 kusukela lapho umuthi ungenile. E-serum yegazi, amapharamitha wekhompiyutha azinza futhi awanqunywa ngemvamisa yokudla. Ukuqedwa kwesigamu sempilo kufike emahoreni ayisishiyagalombili.
Ukufundiswa kwamacwecwe e-Amaril kukhuluma ngokungeneka kokungena kwe-ejenti ngomgoqo we-placental. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi into esebenzayo idlulela kubisi lwebele. Ukusebenzisa umuthi ngesikhathi sokukhulelwa akunconywa kakhulu. Uma ukukhulelwa kutholakele, ukwelashwa kufanele kuqedwe.
Kungenzeka noma cha?
Ngokulandelayo kusuka emiyalweni, umuthi "i-Amaril" kumele usetshenziswe uma kusungulwa uhlobo lwesibili lwesifo sikashukela. Ungasebenzisa ithuluzi njengendlela yodwa yezokwelapha yokulungisa isimo sesiguli. Kuvunyelwe ukuhlanganisa igama ne-insulin, metformin.
Akuvunyelwe ukusebenzisa ithuluzi uma kutholwa isifo sikashukela sohlobo lokuqala, ikoma noma i-precoma ehambisana nesifo sikashukela. I-Amaryl ayilungele ukwelashwa kweziguli ezine-ketoacidosis, kanye nakulabo abanokulimazeka okuqinile kokusebenza kwe-hepatic, renal. Akuvunyelwe ukusebenzisa igama ngesikhathi sokukhulelwa, ukuncelisa ibele. Ungawusebenzisi umuthi ngokuzwela okukhulayo kunoma iyiphi ingxenye esetshenziselwa inqubo yokukhiqiza. Lokhu akusebenzi kuphela kubantu ekutholakaleni kwabo amandla okwamanje okutholakele, kodwa futhi uma kukhona okukhulunywa ngakho emlandweni wezokwelapha.
Ukunemba ngeke kulimaze
Njengoba kukhonjisiwe emiyalweni yokusetshenziswa, i-Amaril (2 mg kanye namanye amafomu wesithako) angasetshenziswa kwezinye izimo ezikhethekile zesiguli kuphela ngaphansi kokubhekelwa okuqinile kwezokwelapha kwezimpawu ezibalulekile zomzimba. Lokhu kufaka ukushiswa, ukuhlinzwa okuhleliwe, ukuvimba kwamathumbu, izinhlobo ezahlukahlukene ze-adsorption yamathumbu. Lokhu kufaka phakathi ukulimala okuningana okuhlukahlukene. Uma kunesidingo sokudlulisela isiguli ukwelashwa kwe-insulin, lokhu kwenziwa kuphela uma kungenzeka, ukuthatha izinkomba zaselebhu, ukuqapha isimo sesiguli ngenkathi uthatha amaphilisi.
Kwa-Amaril, imiyalelo yokusetshenziswa (i-3 mg nezinye izindlela zokukhishwa) zibonisa izindlela ezimbili zokusebenzisa - njengendlela kuphela yokulungisa isimo sesiguli futhi njengengxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi. Kunoma yikuphi okukhethwa kukho, ubude besifundo, inani lomuthi osetshenzisiwe, indlela yokukhululwa yakhethwa ngudokotela ngokuya ngolwazi olutholakala ocwaningweni lwelabhorethri, izifundo ezinamandla zesimo sesiguli. Akuvunyelwe ukusebenzisa i-Amaril ngokubona kwayo kuphela, ukulungisa uhlelo olunqunywe ngudokotela.
Njengomuthi kuphela, i-Amaril ibekwa kuqala ngefomethi emincane - ingadluli ku-milligram ngosuku. Ngokuhamba kwesikhathi, kuvunyelwe ukwanda kokuhlushwa, kepha hhayi ngaphezulu kwesigamu kumaviki amabili. Imiyalo yokusetshenziswa kwamacwecwe e-Amaril aqukethe izinkomba zokukhawulelwa komthamo wansuku zonke kungabi ngaphezu kwama-6 mg. I-capsule ngayinye kufanele ithathwe ngomlomo, ngaphandle kokuphula ubuqotho besibonelo, baphuze amanzi amaningi. I-Amaryl isetshenziswa kanye ngosuku, ngaphambi kokudla kwasekuseni, noma ngesikhathi sokudla kosuku kosuku. Ukuvimbela i-hypoglycemia, kuyadingeka ukudla ngemuva kokufakwa kwe-Amarila.
Ukwakheka, amafomu wokukhishwa
Into esebenzayo e-Amaril yinye kuphela - glimepiride . Izinto ezisele zingabasizi.
Amathebulethi e-Amaril atholakala kumithamo emine ehlukene (1, 2, 3 no-4 mg we-glimepiride).
Ngokuya ngomthamo we-glimepiride, amaphilisi ahluka ngombala:
I-Amaryl 1 mg - amaphilisi apinki (ama-30, ama-60, ama-90 noma ama-pcs ayi-120. Ipakethe ngalinye),
I-Amaryl 2 mg - amaphilisi aluhlaza (inani elifanayo kwiphakheji),
I-Amaryl 3 mg - amaphilisi amancane aphuzi (inani elifanayo kwiphakheji),
I-Amaryl 4 mg - amaphilisi aluhlaza okwesibhakabhaka (inani elifanayo kwiphakheji).
Onke lawa mathebhulethi anomumo wokusaqanda osicaba, ohlangothini ngalunye - aqoshwe u- "NMK" no "ff".
Kukhona nomuthi wokuhlanganisa I-Amaril M, okuthi, ngaphezu kwe-glimepiride, kufaka enye i-ejenti ye-hypoglycemic - metformin.
Amathebulethi e-Amaryl M atholakala kumithamo emibili:
I-1 mg glimepiride, 250 mg metformin,
I-2 mg glimepiride, 500 mg metformin.
Womabili la mathebhulethi amhlophe ngombala, i-biconvex, i-oval ngesimo, embozwe ngumbala wefilimu, futhi aqoshwe ngo-“HD25” ngakolunye uhlangothi.
I-Glimepiride inomphumela kumanyikwe, ilawula ukukhiqizwa kwe-insulin, nokungena kwayo egazini. Futhi i-insulin isivele inciphisa ushukela wegazi ngokuqondile. Ngaphezu kwalokho i-glimepiride ikhuthaza ukugeleza kwe-calcium ephuma egazini kuya emangqamuzaneni izicubu. Iphinde ivimbele ukwakheka kwama-atherosselotic plaque ezindongeni zemithambo yegazi.
I-Metformin yehlisa ukugcwala koshukela egazini ngenye indlela: ithuthukisa ukuhamba kwegazi esibindini, futhi ivuselele ukuguqulwa koshukela (ushukela) kuyi-glycogen iphephe isiguli sikashukela. I-Metformin futhi isiza ukuthathwa kwe-glucose ngamaseli emisipha.
Izidakamizwa ze-Amaryl ne-Amaryl M zinophawu olulodwa kuphela oluzosetshenziswa: thayipha 2 isifo sikashukela (esingathembeli ku-insulin - i.e., esingakwazi ukwelashwa nge-insulin).
Ekusebenzeni, kutholakale ukuthi umphumela we-Amaril (glimepiride) uthuthuka ngokuhlanganiswa kwawo ne-metformin. Ngemuva kwalapho kwahlanganiswa ukuhlanganiswa kwe-Amaril M. okwenzelwe lula iziguli nodokotela.
Umphumela wecala ovame kakhulu lapho usebenzisa womabili i-Amaril ne-Amaril M yi-hypoglycemia (ukwehla kwamazinga kashukela egazini ngaphansi kokujwayelekile).
Eminye imiphumela emibi ayijwayelekile kakhulu, kepha ingathinta umsebenzi wezitho eziningi nezinhlelo eziningi.
Imiphumela engaba khona evela ohlelweni lwezinzwa:
ukozela noma, ngakolunye uhlangothi, ukuphazamiseka kokulala,
ulaka, ukulahlekelwa ukuzithiba,
ukwenza buthaka kokuhlushwa, ukwehla kwezinga lokuphendula,
bethuthumela izandla nezinyawo
Imiphumela engaba khona evela ohlelweni lwezinhliziyo:
Imiphumela engaba khona evela ohlelweni lokugaya ukudla:
Ubuhlungu noma umuzwa wobunzima esiswini,
isifo sohudo (isifo sohudo)
i-hepatitis (engavamile kakhulu).
Imiphumela engaba khona evela ohlelweni lwe-hematopoietic:
i-anemia (inciphise i-hemoglobin),
ukwehla kwenani lamaseli wegazi ahlukahlukene (amangqamuzana abomvu egazi, amaseli amhlophe egazi, ama-platelet, njll.).
Imiphumela yokungezwani komzimba kungukuqubuka kwesikhumba okuhambisana nokulunywa.
Ekuqaleni kokwelashwa, kungabonakala ukuphazamiseka okubonakalayo kwesikhashana.
Umthamo wezidakamizwa ze-Amaryl ne-Amaryl M unqunywa udokotela uqobo esigulini ngasinye, kuya ngokuthi izinga likashukela legazi liphakeme kangakanani.
Ukwelashwa kwe-Amaril kuvame ukuqala ngomthamo omncane we-1 mg. Isiguli sithatha lo muthi kanye ngosuku - ekuseni, ngaphambi kokudla kwasekuseni, noma phakathi naso. Amacwecwe kufanele agezwe phansi ngenani elanele lamanzi (okungenani izinkomishi eziyi-0.5), amaphilisi akufanele ahlafunwe.
Uma kunesidingo, udokotela unyusa kancane kancane umthamo wansuku zonke we-Amaril, esebenzisa isikimu: 1 mg - 2 mg - 3 mg - 4 mg - 6 mg - 8 mg. I-Amaryl 4 mg isetshenziswa kakhulu njengethamo eliphakeme nsuku zonke. Ukuqokwa kwe-Amaril kumthamo we-6 no-8 mg, kunalokho, kuyinto eyehlukile.
Isikhathi sokukhuphuka komthamo kufanele sibe amasonto ama-1-2.
Ukwelashwa kuhambisana nokuhlolwa kokulawula okuphoqelekile ukuthola izinga kashukela wegazi lesiguli.
Ngokomgomo ofanayo, irejimeni yomuthi wesidakamizwa i-Amaryl M. inqunywa. Umthamo wansuku zonke usetshenziswa kumthamo owodwa, noma uhlukaniswe ngemithamo emi-2. Ezasetshenziswa kakhulu yi-Amaryl M 2 mg + 500 mg.
Uma isiguli sesikhohliwe ukuphuthelwa umuthi (i-Amarila noma i-Amarila M), lezi zinsuku ziyaphuthelwa ngaphandle kwemithi. Asikho isidingo sokwandisa umthamo womuthi ngokuphatha okwalandela.
Kubaluleke kakhulu ukuthi isiguli ngemuva kokuphuza iphilisi singakhohlwa ukudla. Ngaphandle kwalokho, ushukela wegazi uzokwehla ngokujwayelekile.
Ngokukhethekile umthamo okhethwe ngokucophelela futhi ngokucophelela womuthi ezigulini esezikhulile (ngaphansi kokulawulwa kokusebenza kwezinso).
Udokotela, obeka isiguli i-Amaryl noma i-Amaryl M, kufanele axwayise ngamathuba emiphumela emibi, futhi okubaluleke kakhulu - ngokwenzeka kwe-hypoglycemia lapho isiguli sithatha umuthi, kepha sikhohlwe ukudla. Kulokhu, isiguli sinconywa ukuthi ngaso sonke isikhathi siphathe amaswidi noma ushukela sibe izicucu ukuze sikwazi ukukhuphula ngokushesha ushukela wegazi.
Ngaphezu kwesheke lokuhleleka kwegazi nomchamo we-umchamo, ukwelashwa kwe-Amaril ne-Amaril M nakho ukuqapha ukwakheka kwegazi nomsebenzi wesibindi.
Ezimweni ezicindezelayo, ezihambisana nokukhishwa kwe-adrenaline egazini, ukusebenza kwe-Amaril ne-Amaril M kuyancipha. Izimo ezinje zingaba yizingozi, izingxabano emndenini noma emsebenzini, izifo ezikhuphuka ngokushisa okuphezulu. Ezimweni ezinjalo, kudluliswa okwesikhashana kwesiguli ku-insulin.
Ezinye izidakamizwa ezisetshenziswa ngesikhathi esifanayo ne-Amaril (Amaril M) zithuthukisa ukusebenza kwawo, kanti ezinye zenza buthaka. Uhlu lwazo zombili kanye nezinye izidakamizwa lukhulu impela. Ngakho-ke, isiguli, lapho sithintana nodokotela ongaziwa, kufanele abike ngokugula kwakhe (isifo sikashukela), nokuthi uthatha i-Amaril. Udokotela uzonikeza izidakamizwa ezingathathi hlangothi ku-Amaril ukwelashwa, noma azoshintsha umthamo womuthi uma kudingeka.
Ukusetshenziswa kwe-Amaril ne-Amaril M kuhlangene notshwala kunikeza ukusabela okungalindeleki: ukusebenza kwe-Amaril kungahle kwehle noma kukhuphuke.
Ukubuyekezwa okuningi kweziguli eziphathwa nge-Amaril ne-Amaril M, kunikeza isizathu sokusho ukuthi umuthi usebenza kakhulu lapho umthamo womuthi ukhethwe udokotela ngokufanele.
Isitatimende sokuthi imiphumela emibi kakhulu ye-Amaril ne-Amaril M yi-hypoglycemia (ukwehla okwedlulele kokuhlushwa kashukela egazini) kuqinisekiswa izibuyekezo. Iziguli zichaza izimpawu ze-hypoglycemia njengobuthakathaka obukhali, isiyezi, indlala, izandla ezithuthumela nomzimba wonke. Uma ungathathi noma yiziphi izinyathelo, ungalahlekelwa ukwazi. Ngakho-ke, iningi labantu abanesifo sikashukela abathola ukwelashwa nge-Amaril (Amaril M) bavame ukuthwala ushukela ngezicucu noma uswidi. Ngemuva kokudla ucezu kashukela, isiguli sanda ngokushesha amazinga eglucose egazini, futhi inhlala-kahle yakhe iba ngcono.
Kwesinye isikhathi, abashayeli bezimoto bakhala ngokuncipha kokuphendula ngenkathi beshayela. Lokhu kulingana nomphumela oseceleni oshiwo kwimiyalo ngohlelo lwezinzwa.
Ukubuyekezwa okuningi ngokuvuma kubhala ukuthi umbala ohlukile wamathebulethi e-Amaril awusizi ukudida umthamo.
Ezinye iziguli, ikakhulukazi asebekhulile, zivuma ukusebenza kahle kwe-Amaril (Amaril M), zibheka ukuthi intengo yayo isiphezulu kakhulu.
Intengo yamathebulethi e-Amaryl (amaphilisi angama-30 ngephakethe ngalinye), ngokuya ngethamo, ngama-ruble angama-203 - 840.
Intengo yamathebulethi e-Amaryl M (amaphilisi angama-30 ngephakethe ngalinye) yile:
Amaril M 2mg + 500mg: 411 - 580 rubles.
I-Amaril M kumthamo we-1 mg + 250 mg cishe ayinqunyelwe odokotela, futhi iyivelakancane kumakhemisi.
Hlanganisa ukuze usizakale
Imiyalo yokusebenzisa "i-Amaril" iqukethe izinkomba zemithetho yokusetshenziswa ngokuhambisana namanye amagama okwelapha. Kungenzeka ukusebenzisa umuthi uma isiguli siphathwa nge-metformin. Ngenkathi ugcina umthamo walesi sikhungo, u-Amaril usebenza njengengxenye eyengeziwe yokwelapha. Kuqala, igama okukhulunywa ngalo linqunywa ngenani le-1 mg ngosuku, kancane kancane likhuphula ukugxila kwesikhathi, kuze kutholakale umphumela ozinzile we-hypoglycemic.
Ngosuku, umenzi kwimiyalo yokusebenzisa i- "Amaril" utusa ukuqokwa okungadluli ku-6 mg wento esebenzayo. I-Glimepiride ne-insulin therapy kunganciphisa isidingo segama lesibili ngama-40% (kwesinye isikhathi amancane).
Imiphumela engemnandi: okufanele uyilungiselele?
Njengoba kungabonakala kuzibuyekezo, imiyalo, i-Amaril ingadala imiphumela emibi. Akukho lutho olumangazayo kulokhu - zimpawu zezidakamizwa ezahlukahlukene eziklanyelwe ukwehlisa izinga loshukela ohlelweni lokujikeleza. I-Amaryl ingadala i-hypoglycemia. Njengomthetho, isiguli ngasikhathi sinye sizizwa sibuthakathaka, silele, ikhanda, indlala, isicanucanu kungenzeka.Kuyaziwa ukuthi uma usebenzisa i- "Amaril" kunethuba lokucasuka kwesitulo, umsebenzi wesisu, nethambo. Ngokulashwa isikhathi eside, kunengozi yezinguquko ezingezinhle ohlelweni lokujikeleza kwegazi. Kukhona ubungozi be-anemia, i-thrombocytopenia. Impendulo enokwenzeka yokungezwani komzimba, ukukhulisa ukuzwela ukukhanya.
Ukubuyekezwa, imiyalo "Amarila" isho amathuba athile okuphazamiseka kokulala. Ucwaningo olusemthethweni lukhombisile ukuthi amathuba okuba nemiphumela emibi kangako ngokwezigaba mancane, kodwa-ke, mkhulu kune-zero. Futhi, ngezinga eliphansi ngokweqile okungenzeka, iziphazamiso, izithiyo ezingenakuvinjwa kungenzeka. Ezinye iziguli zizizwa zinesiyezi, ziyaqhaqhazela, ukwehluleka kwemizwa kubhekwe, izinkinga ngokuhlangana kokunyakaza kungenzeka. Ezimweni ezikhethekile, ukwephulwa kwesigqi sokushaya kwenhliziyo, ukwehluleka, ukudideka kuqoshwe. Lapho ulungisa ukugxila kweglucose egazini, kungenzeka ukuthi kube khona ukuphazamiseka kokubonakalayo kwe-acuity, kepha ushintsho olunjalo lushintsha ngokuphelele.
Imithetho yokusebenzisa: kubalulekile ukuyilandela
Umyalo we-Amarila unikeza ukuholwa kwamanye amacala akhethekile. Ikakhulu, uma inani elikhulu kakhulu lezinto ezifakiwe lingena emzimbeni, kukhona ingozi ye-hypoglycemia. Ukuqeda imiphumela emibi, ukwethulwa kwe-glucose kuyadingeka. Umcimbi kufanele wenziwe ngokuqinile ngaphansi kokuqondisa udokotela, kodwa ngokushesha okukhulu.
Sebenzisa ngokuya ngemiyalo ethi "Amaryl" ingasetshenziswa ngokuhambisana namanye amagama wezidakamizwa, kepha kubalulekile ukuthi unake ithonya elenzanayo lezakhi. Ukusebenza kwe-hypoglycemic ekuphathweni komlomo kuyasebenza uma isiguli sisebenzisa i-insulin, sithatha ama-anabolics, ama-steroid, ama-metformin, ama-androgen compounds, i-allopurinol, i-coumarin, kanye nokutholwa kwalokhu. Ngokunemba okukhulu, i-Amaril ibekelwe abantu abaphoqelelwa ukuthi belashwe nge-chloramphenicol, antidepressants eqenjini elivimba ukubanjwa kwe-MAO, miconazole. Umphumela wokuthatha i-Amaril ungakhuphuka ungalindeleki lapho ama-quinolones, i-tetracycline, ne-pentoxifylline kungenwa. Imikhawulo ekhethekile ibekwa ukusetshenziswa kwama-salicillates, amagama athile avela esigabeni sama-sulfonamides.
Yini enye okufanele uyibheke?
Umyalo we-Amarila ukhombisa ukuthi ngokuhlanganiswa okuthile namanye amagama wezidakamizwa kunobungozi bokwehla komphumela we-hypoglycemic. Lokhu kungenzeka ngokusetshenziswa kwama-barbiturates kanye nezinhlobo ezithile zama-diuretics, kanye nokumisa izinqubo zokuvuvukala ze-corticosteroids. I-Amaril isebenza kancane uma isiguli sithatha i-laxative, ama-hormone ocansi abesifazane nabesifazane abangama-thyroid. Ukwehla kokusebenza kwe-hypoglycemic kubhekwa kuhlanganiswa ne-nicotinic acid, i-sympathomimetics, ne-rifampicin.
Umyalo we-Amarila udonsela ukunaka kokuncipha kokusebenza kwomuthi uma isiguli sidla ngokungafanele, ngokungafanele, futhi sisebenzisa kabi utshwala. Ukusebenza kahle kokudla kunciphile uma ukudla kugcwele ama-carbohydrate. Kwezinye izimo, kuyadingeka ukulungisa umthamo opakeme womuthi, ugxile kwesisindo somzimba sesiguli. Udokotela ukhetha inketho engcono kakhulu usebenzisa amafomula wokubala akhethekile.
Kade futhi okukhulu
Inkambo ende yokuthatha i-Amaril kungenzeka kuphela ngaphansi kwezimo zokuqapha njalo kwe-glucose ohlelweni lokujikeleza. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuhlola ukusebenza kwesibindi nezinso, ukuqapha izakhi zegazi ezifanayo.
Uma i-overdose ibonwa, kunengozi yokuncipha kokuhlushwa. Lokhu kubaluleke kakhulu uma isiguli empilweni yansuku zonke sishayela noma sihlangabezana nezinye izimo ezidinga ukunakekelwa okukhulu kanye nezinga lokuphendula okukhulu.
I-Amaril ivezwa emashalofini ekhemisi ngamanani asukela kuma-ruble angama-250 kuya kwangama-1000. Ukulungiswa okuncane kungenzeka, okuningi kuncike kwinqubomgomo yamanani yokuphuma ethile. Izinketho ezingabizi kakhulu umthamo we-milligram, futhi ezibiza kakhulu yi-4 mg. Amaphakeji aqukethe amakhompiyutha anama-2 mg wethemikhali esebenzayo abiza cishe ama-ruble angama-500, nama-3 mg - cishe ama-ruble angama-770.
Uma kungenzeki ukuthola umkhiqizo okhethiwe, ama-Amarila analogue angahlangula. Imiyalo yokusebenzisa lapho ukhetha enye i-ejenti kufanele ibhekwe ngokunembe kakhulu, futhi ukufaka esikhundleni ngokwayo kufanele kwenziwe kuphela ngokuvumelana nodokotela owelaphayo, uma kungenjalo kukhona ingozi yokuphendula okungalungile okuvela emzimbeni, futhi ukwelashwa akusebenzi ngokwanele. Kuma-analogues, amagama athi "Altar", "Diabresid", "Glemaz" asabalele. Kwesinye isikhathi odokotela batusa ukuhlala nomunye wemithi elandelayo:
Okuningi maqondana: Glimepiride
Ngaphansi kwaleli gama, umuthi osuselwa kufektri esebenzayo uyathengiswa. Kunezindlela ezinhlanu: 1, 2, 3, 4, 6 mg. Ngaphezu kwento esemqoka, kwakusetshenziswa izakhi ezisizayo. Kubaluleke kakhulu ukuthi ujwayele uhla oluphelele uma isiguli sinezinkinga zokungabekezeleli kuya kwi-lactose, i-cellulose, noma ezinye izinto ezihlanganiswa embonini yezemithi. Wonke amaphilisi we-Glimepiride aqukethe odayi abanikeza ukwahluka kombala ngamunye. Umthamo omncane kunazo zonke upendiwe ku-iron ironide ebomvu, ngoba kusetshenziswa amamayela amabili e-iron iron oxide noma i-aluminium varnish. Ama-3 mg ahlotshiswe nge-iron iron oxide, i-4 mg ene-indigo carmine.
Amaphilisi ahlanganiswe ku-aluminium ne-polyvinyl chloride blisters. Ibhokisi elilodwa lamakhadibhodi liqukethe iqubu elilodwa. Isimo ngasinye ngasinye siyithebhulethi eyisilinda eyisicaba efakwe notch, amamaki.
I- "Glimepiride" yenzelwe ukwelashwa kwabantu abanesifo sikashukela ngendlela ezimele ye-insulin, okungukuthi, uhlobo lwesibili. Ngaphansi kwethonya lokwenza okusebenzayo, umsebenzi wamaseli we-pancreas uyalungiswa futhi i-insulin ikhishwa yi-beta -akhiwo. Umuthi, njengabanye beqembu elifanayo, uyakwazi ukuvimba isiteshi se-potassium, esincike kwi-ATP, kulwelwesi lwamanyikwe. Inqubo enjalo ivusa ukwehla kwe-beta-cell, ivuselela ukuvulwa kweziteshi ze-calcium, okukhishwa kuzo i-insulin. Isici esihlukile salolu hlelo lokusebenza ukufaka ukungena ngokushesha ezibophweni eziqinile ezinamaphrotheni we-membrane, yize isibopho sitholakala kwezinye iziteshi. Lokhu kwehlukanisa i-Glimepiride kwezinye izidakamizwa kwisigaba se-sulfonylurea.
Ukwemukelwa kwe- "Glimepiride" akubeki ukuvalwa kweziteshi zenhliziyo ezinamandla ze-ATP, ezincike kwi-potassium. Ngaphansi kwethonya lecoolethi, ukutholakala kwezicubu zemisipha, izicubu ze-adipose ku-insulin ziyasebenza. Amaseli we-Hepatic asebenzisa i-hormone enomsebenzi omncane. I-Glimepiride iyakwazi ukwenza umsebenzi wezakhiwo ezithile ze-enzyme, okuholela ekwandeni kwe-glyco-, hypogeneis. Izinga lokuvezwa kwangempela linqunywa umthamo okhethiwe wesidakamizwa. Ukuzivocavoca okwenzeka ngamandla ngokuhambisana nokusetshenziswa komuthi kuhambisana nokuncipha kokukhiqizwa kwe-insulin (njengasikhona ukusekelwa okuthile). Umuthi unezakhiwo ze-antioxidant, unciphisa ukuvela kwegazi, unomphumela we-antiatherogenic.
I- "Glimepiride", njengoba ikhonjiswe ngezifundo zomtholampilo, ikhangiswa kusuka emgudwini wesisu kuye ngezinga elifanayo nokudla, nangaphandle kwayo. I-bioavailability icishe ibe ngokuphelele, ilinganiselwa ukuthi isondele kakhulu kumaphesenti ayikhulu. Ukufinyelela izinga eliphakeme kakhulu lokujikeleza ohlelweni lokujikeleza, kudingeka imizuzu eyi-150. Ukucaciswa komuthi kuhamba kancane, futhi ukubopha okunamaprotheni e-plasma kuyanda. Izilinganiso ezingekho emthethweni zinikeza inkomba ye-95%. I- "Glimepiride" iyakwazi ukungena kwi-placenta, ibonwa ubisi lwebele, okwaba yisisekelo sokwenqatshelwa kwendlela enjalo yokwelapha ngesikhathi sokukhulelwa. Iphesenti eliphansi lendawo esebenzayo liyakwazi ukuwela umgoqo wegazi-lobuchopho.
Isigamu sempilo okungenani amahora amahlanu, kepha akukho ngaphezulu kwesishiyagalombili ngokusebenza okwanele kwezinhlelo zomzimba nezicubu. Izikhathi zokuphumula isikhathi eside ziyadingeka uma isiguli sinqunywe imithamo ephezulu yomuthi. Kuyaziwa ukuthi i-glimepiride ishintshwa kumaseli wesibindi, futhi i-enzyme ye-CYP2C9 ibamba iqhaza ekuphenduleni. Ingxenye engaphezu kwesigamu yama-metabolites ishiya umzimba ngohlelo lobuchwepheshe, cishe ingxenye yesithathu - enezindunduma. Awukho umphumela wokuqongelelwayo. I-Pharmacokinetics ihlobene kakhulu nobulili, iminyaka yesiguli.
I-Glimepiride isetshenziswa uma kusungulwa uhlobo lwesibili sikashukela, okungukuthi, ngaphandle kwe-insulin. Baphendukela kulo muthi kuphela uma kungenakwenzeka ukulungisa isimo sesiguli ngezindlela ezinobumnene - ukunciphisa isisindo, ukusebenza komzimba, ukujwayela ukudla.
I-"Glimepiride" ayikwazi ukuthathwa uma kutholakala ukuthi i-ketoacidosis, isifo sikashukela kubangele ukuqaqamba kwesibindi nezinso ngendlela ebucayi. I-Glimepiride ayenzelwe ukwelashwa kweziguli ezihlushwa uhlobo lokuqala lwe-mellitus yesifo sikashukela, kanye nabesifazane abaphethe i-fetus noma ibele. Ithuluzi alisetshenziswanga ekuboneni impendulo yokungezwani komzimba kunoma yiziphi izakhi ezisetshenziselwa ukwenziwa kwe-Glimepiride.
I-Amaryl: imiyalo esetshenzisiwe
Ngemuva kokuthatha umuthi, i-pancreas iyasebenza, okwenza ikhiqize i-insulin futhi iwondle egazini. Lokhu kusiza ukwehlisa ushukela wegazi ngemuva kokudla.
I-oxidation ye-glimepiride esibindini kwenzeka ngokubamba iqhaza kwe-enzyme eqenjini le-P450. Ngakho-ke, uma umuntu ethatha ezinye izidakamizwa ezidinga le cytochrome, kungavela izinkinga ezithile ekusebenzeni komzimba. Izidakamizwa ezinjalo zibandakanya i-fluconazole ne-rifampicin.
I-Glimepiride ikhishwa isibindi ngevolumu engama-60% nasezinso ngevolumu engama-40%.
Umuthi ubekelwe abantu abanenkinga yesifo sikashukela sohlobo 2 futhi abakwazi ukulawula ukuthuthukiswa kwalesi sifo ngokudla nangokomzimba.
Kuvunyelwe ukuhlanganisa ukuthatha i-Amaril ngemijovo ye-metformin kanye ne-insulin.
Ukuxhumana kokuphuza umuthi yilezi:
Thayipha isifo sikashukela sokuqala.
Ukungabekezelelani komuntu ngamunye kwizakhi ezakha umuthi.
Amaphutha amakhulu ekudla okunempilo.
Ama-pathologies wesistimu yokugaya ukudla, ahambisana nokudla malabsorption.
Ukunciphisa amakhalori nsuku zonke ngaphansi kwe-1000 kcal.
Iminyaka ingaphansi kweminyaka eyi-18.
Okudingayo ukunaka ngokukhethekile
Ngesikhathi sokwelashwa, kunobungozi be-hypoglycemia, ikakhulukazi ngokweqile okukhulu komthamo wansuku zonke onconyiwe. Uma umuntu enezimpawu zokuqala zalesi simo esisongela impilo, lapho-ke kudingeka ushayele i-ambulensi ngokushesha okukhulu.
Emavikini okuqala ayi-1-2 ngemuva kokuqala kokwelashwa ne-Amaril, kuyadingeka ukunciphisa umsebenzi, okudinga ukwanda komzimba. Kuyinto efiselekayo kakhulu futhi ukulahla ukuphathwa kwanoma yiziphi izindlela zokuhamba.
Awukwazi ukukhetha umthamo wakho womuthi, lokhu kungumsebenzi kadokotela.
Ungathola amaphilisi ngomthamo we-1, 2, 3 no-4 mg. Thatha umuthi kanye njalo emahoreni angama-24, ngaphambi kokudla kwasekuseni.
Ithebhulethi kufanele igwinywe iphelele. Uma kunesidingo, ingahlukaniswa ngama-halves amabili, kepha umuthi awukwazi ukuhlafunwa. I-Amaryl igezwa ngamanzi.
Umphumela owesabekayo futhi ovame kakhulu we-hypoglycemia. Okunye ukusabela okungekuhle okuvela emzimbeni kufaka phakathi: isikhumba esishisayo, ukuqubuka kwesikhumba, isicanucanu nokuhlanza. Mhlawumbe ukuthuthukiswa kwesikhumba hypersensitivity emisebeni ye-ultraviolet. Ngokusetshenziswa isikhathi eside, kunokuntuleka kwe-sodium emzimbeni.
Kwesinye isikhathi iziguli zikhononda ngokulimazeka okubonakalayo kwesikhashana, okubangelwa ukwehla ngokushesha kweglucose yegazi.
Ngesikhathi sokuzala kwengane nangesikhathi sokuncelisa kwayo, i-Amaril ayinqunyelwe.
Ukuthatha lesi sidakamizwa neminye imithi
Akunconyelwe ukuhlanganisa ukuthatha i-Amaril neminye imithi, efana: nezidakamizwa ukwehlisa umfutho wegazi, ama-NSAIDs, njll. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala ukwelashwa, udinga ukuthola izeluleko zezokwelashwa. Uma isiguli sithatha noma imuphi umuthi, khona-ke kufanele sazise udokotela othintekayo ekwelashweni kwesifo sikashukela.
Uma kwenzeka i-overdose
Ukuthatha umthamo omkhulu womuthi kuhlotshaniswa nengozi ye-hypoglycemia. Lesi simo sidinga ukulashwa ngokuphuthumayo esibhedlela.
Ukukhishwa kwefomu, izici zokugcina, ukwakheka
I-Amaryl itholakala kwifomu lethebhulethi.
Umbala wezibhebhe uzohluka, kuya ngethamo lomuthi:
Amathebulethi aluhlaza okwesibhakabhaka anomthamo we-4 mg.
Amathebulethi aphuzi anomthamo we-3 mg.
Amathebhulethi aluhlaza anomthamo we-2 mg.
Amacwecwe apinki anomthamo we-1 mg.
Ngaphezu kwesithako esikhulu esisebenzayo (i-glimepiride), umkhiqizo wezokwelapha uqukethe izakhi ezisizayo: i-povidone, i-lactose monohydrate, i-sodium carboxymethyl starch, i-cellulose, i-magnesium stearate, udayi.
Kuyadingeka ukugcina umuthi ekushiseni komoya ongadluli kuma-30 ° C.
Impilo yeshalofu yamathebulethi yiminyaka emi-3.
Amaril kuya ngokudla
I-Amaryl ithathwa ngaphambi kokudla, ukuze i-glimepiride iqale ukusebenza ngesikhathi sokudla lapho kuqala khona ukumunwa. Odokotela batusa ukuthatha i-Amaril ngaphambi kokudla kwasekuseni. Uma umuntu ezenqaba ekudleni kwasekuseni, ngasizathu simbe noma ngesinye, udinga ukuthatha iphilisi le-Amaril ngaphambi kokudla.
Izincomo ezifanayo mayelana nokuphatha ziyasebenza nakwezinye izidakamizwa ezifanekisa i-Amaril.
Ukudla ngemuva kokuphuza umuthi kuyadingeka, ngaphandle kwalokho umuntu angaba ne-hypoglycemia, lapho izinga likashukela wegazi lihle liye emazingeni abucayi.
Ngokuya kobunzima benkambo ye-hypoglycemia, kungavezwa ukukhuphuka kwenhliziyo futhi kuze kufike ku-coma.
Ngingakwazi ukuthatha i-Amaryl ngiphuze utshwala?
Ngesikhathi sokulashwa ne-Amaril, kuyadingeka ukuyeka ukusetshenziswa kotshwala. Uma lokhu kutuswa kungalandelwa, umuntu uzoba ngcono kakhulu i-hypoglycemia. Isibindi singathinteka futhi. Kubantu abaningi, ukwenqaba ngokuphelele utshwala kuyinkinga enkulu, ngoba ukwelashwa kwesifo sikashukela kufanele kuqhubeke kukho konke impilo.
Ngakho-ke, uma isiguli singakwazi ukubukhipha utshwala, lapho-ke kufanele sishintshele kwezinye izidakamizwa ukwehlisa ushukela wegazi.
Kuthatha isikhathi esingakanani i-Amaril ukuqala?
Ushukela wegazi uncishiswa ngangokunokwenzeka cishe amahora angama-2-3 ngemuva kokuthatha umuthi. Ososayensi bakholelwa ukuthi umuthi uqala ukusebenza isigamu sehora - ihora ngaphambi kokwehla okukhulu kushukela wegazi. Ngakho-ke, awunakuhlehlisa ukudla kuze kufike usuku lwamuva, uma kungenjalo umuntu uzoba ne-hypoglycemia.
Umuthi usebenza amahora angama-24 ngemuva kokuphathwa.
I-Amaryl noma i-Diabeteson - yini okufanele uyikhethe?
Isidakamizwa i-Diabeteson asithengiswa; okwamanje, umuthi kuphela obizwa ngeDiabeteson MV ongatholakala ezitolo zezidakamizwa. Lesi sidakamizwa sesizukulwane esisha esisebenza sothobekile kunesandulelayo.
Uma umuntu ecabanga ukuthi yisiphi isidakamizwa okufanele asikhethe - u-Diabeteson noma u-Amaril, khona-ke kufanele abonane nodokotela futhi axazulule le nkinga.
Kungenzeka yini ukuhlanganisa ukwamukelwa kwe-Amaril neYanumet?
I-Yanumet iyisidakamizwa esihlanganisiwe esuselwa kwi-metformin. Inezindleko eziphakeme futhi ayinabalingani ashibhile. Ungazama ukuqala ukwelashwa ngemithi equkethe into eyodwa kuphela esebenzayo - i-metformin. Ithuluzi lasekuqaleni okusekelwe kulo yiGlucophage. Kwesinye isikhathi odokotela batusa ukuthi iziguli ezinesifo sikashukela zixube ukuthatha i-Amaril neYanumet ohlelweni oluyinkimbinkimbi, kepha awukwazi ukuzenzela inhlanganisela enjalo
I-analogue ye-Amaril yokukhiqizwa kwangaphandle yisidakamizwa i-Glimepirid-Teva. Ikhiqizwa yinkampani yaseCroatia iPliva Hrvatska.
Izithonjana zaseRussia ze-Amaril yilezi:
UGlemaz, ovela enkampanini uValeant.
I-Glimepiride evela ezinkampanini i-Atoll, Pharmproekt, Pharmstandart neVerteks.
I-Diameride evela enkampanini i-Akrikhin.
I-Glimepiride Canon evela enkampanini yeCanonpharm.
Bonke abakhiqizi bakhiqiza umuthi wabo kumthamo we-1, 2, 3, 4 mg. Izindleko zesidakamizwa esithile kumele zicaciswe kumakhemisi.
I-Amaryl M isidakamizwa esiyinhlanganisela lapho, ngaphezu kwe-glimepiride, i-metformin ikhona. Lokhu kukuvumela ukuthi wehlise ngempumelelo amazinga kashukela wegazi futhi uvikele umuntu ezinkingeni zesifo sikashukela, esingaba sibi kakhulu.
Kodwa-ke, ukwelashwa kuqalwa kangcono ngomuthi osuselwa ku-metformin kuphela. Uma umphumela owufunayo ungatholakali, kuzodingeka uthole izeluleko zezokwelashwa.
Ikhishwa ngemithi kadokotela.
Malini i-Amaryl? Intengo emaphakathi emakhemisi incike kwifomu lokukhululwa:
I-Amaryl amaphilisi 1 mg, ama-30 ama-pcs. - kusuka ku-262 rub.
I-Amaryl amaphilisi 2 mg, ama-30 ama-pcs. - kusuka ku-498 rub.
I-Amaryl amaphilisi 3 mg, ama-30 ama-pcs. - kusuka ku-770 rub.
I-Amaryl amaphilisi 4 mg, ama-30 ama-pcs. - kusuka ku-1026 rub.
I-Amaryl itholakala kwifomu lethebhulethi emithanjeni eminingana: 1, 2, 3 no-4 mg. Izici zalo zingenxa yento esebenzayo - glimepiride, i-sulfonylurea derivative. Njengezinto ezisizayo, i-lactose monohydrate, i-povidone, i-magnesium stearate, i-microcrystalline cellulose kanye nedayi E172 noma i-E132.
Akunandaba nomthamo, wonke amaphilisi ayahlukaniswa futhi aqoshwe. Njengesici esihlukanisayo - umbala wethebhulethi uqobo: 1 mg pink, 2 mg luhlaza, 3 mg palephu ophuzi no-4 mg oluhlaza okwesibhakabhaka.
I-Glimepiride - into esebenzayo yesidakamizwa - inomphumela omuhle kuma-pancreas, isiza ukulawula ukukhiqizwa kwe-insulin nokungena kwayo egazini. Futhi, i-insulin inciphisa inani loshukela egazini.
Ngenxa yemiphumela ye-glimepiride, i-calcium ephuma egazini ingena kumaseli wezicubu futhi isize ukuvikela ukwakheka kwezigcawu ze-atherosclerotic ezindongeni zemithambo yegazi.
I-Metformin iyasiza futhi ukunciphisa i-glucose yegazi, kepha ngendlela ehlukile: ithuthukisa ukujikeleza kwe-hepatic futhi iguqula ushukela wegazi uyi-glycogen, into ephephile ezigulini ezinesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, i-metmorphine ikhuthaza ukumuncwa kangcono kwe-glucose ngamaseli emisipha.
Kwatholakala ukuthi i-glimepiride isebenza kangcono kakhulu ngokuhlanganiswa ne-metformin. Ngalesi sizathu, i-Amaryl M yadalwa - isidakamizwa esilungele zombili iziguli nodokotela.
Ngokusho kwemiyalo, i-Amaryl ifakwe emacaleni alandelayo:
Izifo ezingajwayelekile zofuzo (ukuntuleka kwe-lactase, ukungabekezeleli kwe-galactose, i-glucose-galactose malabsorption),
Hypersensitivity kuzingxenye ezisebenzayo noma ezisizayo zomuthi,
Isifo sikashukela nokukhohlisa, i-ketoacidosis yesifo sikashukela,
Ukulimazeka okukhulu kokusebenza kwesibindi (kufaka phakathi iziguli ezikwi-hemodialysis),
Ekusetshenzisweni kwe-Amaril kufanele kuqashelwe lapho:
Ukwephulwa kokufakwa kokudla nezidakamizwa emgudwini wesisu (i-paresis yamathumbu, ukuphazamiseka kwamathumbu),
Ubukhona bezici zobungozi be-hypoglycemia,
Izifo ezijwayelekile ngesikhathi sokwelashwa noma lapho indlela yokuphila yesiguli ishintsha (ukuguquka kokudla noma isikhathi sokudla, ukuncipha noma ukwanda komzimba)
Ukushoda kwe-glucose-6-phosphate dehydrogenase.
I-Amaryl is contraindication ekukhulelweni. Esimweni sokukhulelwa okuhleliwe noma ekuqaleni kokukhulelwa, owesifazane kufanele adluliselwe ekwelashweni kwe-insulin.
Kusungulwe ukuthi i-glimepiride ikhishwa ubisi lwebele. Ngenkathi yokuqunjelwa, kufanele udlulisele lona wesifazane ku-insulin noma ayeke ukuncelisa ibele.
Ukusetshenziswa kwe-Amaril kungavusa impendulo elandelayo elandelayo:
Uhlelo lokugaya ukudla: kuyaqabukela - kubuhlungu besisu, ukuhlaselwa isicanucanu, isifo sohudo, ukugabha, umuzwa wokuchichima nobunzima e-epigastrium, kwezinye izimo - ukwanda komsebenzi we-cholestasis kanye / noma ama-enzyme esibindi, i-hepatitis, jaundice, ukusongela kwesibindi okusongela impilo.
I-Organ yombono: ekuqaleni kokwelashwa, ukuphazamiseka okubonakalayo kwesikhashana kungenzeka, kuvuswa ukushintshwa kwezinga le-glucose egazini.
Uhlelo lwe-hematopoietic: kwezinye izimo - i-granulocytopenia, i-leukopenia, i-pancytopenia, i-hemolytic anemia, i-agranulocytosis kanye ne-erythrocytopenia, kuyaqabukela i-thrombocytopenia. Ekusetshenzisweni kwe-Amaril ngemuva kokumaketha, kuye kwabikwa amacala amakhulu we-thrombocytopenia ne-thrombocytopenic purpura.
Ukubonakaliswa kwe-allergic: akuvamile - ukusabela kwe-pseudo-allergic and allergic (urticaria, ukuqubuka kwesikhumba nokulunywa). Ukuphendula okunjalo kuvame ukuba mnene, kepha kungangena ekushintsheni okukhulu ngokuncipha okukhulu komfutho wegazi, ukushesha komoya, ukushaqeka kwe-anaphylactic, i-vasculitis ye-allergic (ezimweni ezingavamile).
I-Metabolism: njengakwezinye izinto eziphuma ku-sulfonylurea, i-hypoglycemia ende kungenzeka. Izimpawu zokuphazamiseka yilesi isicanucanu, ikhanda, ukugabha, indlala nokukhathala, ukunaka ukungabineki, ukozela, ukuphazamiseka kokulala, ukulahleka kokuzibamba, ukukhathazeka, i-bradycardia, ulaka, ukuphazamiseka kwemizwa, ukulahleka kokuqapha kanye nesivinini sokuphendula, ukuphazamiseka okubukwayo, ukudangala , ukukhohlisa, ukudideka, ukuphazamiseka kwengqondo, i-aphasia, ukwethuka, isiyezi, ukugcwala kwe-cerebral, ukuphefumula okujulile, ukulahlekelwa ukwazi kuze kufinyelele ku-coma. Ngaphezu kwalokho, kungahle kube nezimpawu zokuphikisana nomthetho we-adrenergic ekuphenduleni kwe-hypoglycemia (ukukhathazeka, ukubonakala kwesithukuthuku esibandayo, i-angina pectoris, i-tachycardia, ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo, ukuqina kwenhliziyo kanye nomfutho wegazi osemusha). Isimo somtholampilo se-hypoglycemia enzima sifana nesifo sohlangothi.
Umphumela: kwezinye izikhathi - i-photosensitivity, hyponatremia.
Izimpawu ze-overdose: i-hypoglycemia eyingozi, esongela impilo (ngokwelashwa isikhathi eside nge-glimepiride kumithamo ephezulu kanye nokusetshenziswa ngokweqile komuthi).
Nge-overdose ye-Amaril, isicanucanu, ubuhlungu besisu, nokuhlanza kungenzeka. I-Hypoglycemia kungenzeka, lapho kuqhaqeka, ukukhathazeka, ukuthikamezeka okubukwayo, ukozela, ukuhlangana kahle, ukuquleka, ukoma kungakhula.
Uma kwenzeka kusetshenziswa i-overdose, i-gastric lavage, ngemuva kokusetshenziswa kwama-enterosorbents. Ukuphathwa kwe-glucose kufanele kuqalwe ngokushesha okukhulu. Ukwelashwa okuthe xaxa kuyimpawu. Kwi-overdose enkulu, ukulaliswa esibhedlela ophikweni lokunakekelwa oludingekayo kuyadingeka.
Ukusetshenziswa okufanayo kwe-amaryl nge-insulin, ezinye izidakamizwa ezokwehlisa ushukela, amanye ama-antibal (tetracyclines, sulfanilamides, clarithromycin), imithamo ephezulu ye-pentoxifylline, i-fluoxetine, i-fluconazole, i-anabolic steroid, i-ACE inhibitors (Captoprilprin, drilopril, erin, priloprilprin. . Ukuhlanganiswa kwe-amaryl ngama-barbiturates, ama-laxatives, ama-diuretics, imithamo ephezulu ye-nicotinic acid, ne-rifampicin kuzoba nomphumela ophambene.
Ama-Beta-blockers (i-carvedilol, i-atenolol, i-bacoprolol, i-metoprolol, njll.), I-reserpine, i-clonidine, okuphuma ku-coumarin notshwala kungakhuphuka futhi kwehlise umphumela we-hypoglycemic we-amaryl.
Ngesikhathi sokusetshenziswa kwe-Amaryl yesifo sikashukela sohlobo 2, ukubuyekezwa kutholwe kukuhle ezigulini eziningi. Lokhu kufakazela iqiniso lokuthi, ngomthamo ofanele, umuthi ulwa ngempumelelo ne-hyperglycemia. Ngaphezu kokusebenza kahle, abathengi abaningi babize umbala ohlukile wezibhebhe ngekhwalithi enhle yesidakamizwa - lokhu kusiza ukungadidanisi umuthi ngomthamo ohlukile we-glimepiride.
Ukubuyekezwa okutholwe ku-Amaril akuqinisekisile ukusebenza kwawo kuphela, kepha nemiphumela emibi ekhonjisiwe kwimiyalo eya e-Amaril. Imvamisa, iziguli ezisebenzisa umuthi zikhombisa izimpawu ze-hypoglycemia:
Ukuthuthumela emzimbeni wonke.
Ukwanda kwesifiso sokudla.
Imvamisa, ngenxa ye-hypoglycemia ku-mellitus yesifo sikashukela, kunengozi yokulahlekelwa ukwazi.
Ngakho-ke, labo abathatha i-Amaril kufanele baphathe imikhiqizo equkethe ushukela njalo (ngokwesibonelo, amaswidi), ukuze, uma kudingekile, bakwazi ukukhuphula amazinga abo kashukela futhi bathuthukise inhlala-kahle yabo.
Kodwa-ke, ngokusho kodokotela, ukushintshwa kwezinga likashukela akuyona inkomba yokungasebenzi komuthi. Lapho kuvela izimpawu ezinjalo, kwanele ukulungisa umthamo.
Inkinga evamile kubashayeli abaphoqelelwa ukuthatha ama-hypoglycemic agents ukusabela okuthuthukayo lapho ushayela imoto. Umphumela ofanayo ofanayo uboniswa kwimiyalo ohlwini lwemiphumela emibi engaba khona. Ukwehla kokuphendula kuchazwa ngumthelela we-glimepiride ohlelweni lwezinzwa.
Phakathi kweziguli ezinesifo sikashukela esidala, ekubuyekezweni kwe-Amaril, abaningi baphawula iphuzu elinye elibi: yize kusebenza kahle ukuthi i-Amaril yehlisa ushukela, umuthi wesifo sikashukela ubiza kakhulu, ngoba umuthi ungabiza ngaphezu kokufana okuthile, kufaka phakathi owaseRussia. ukukhiqiza.
Ama-analogues wesakhiwo se-Amaril afaka izidakamizwa: Glemaz, Glumedeks, Meglimid, Diamerid.
Ngaphambi kokusebenzisa iziqu, bonisana nodokotela wakho.
Umuthi we-Amaril wesizukulwane esisha
Imiyalo ye-Amaril yezidakamizwa ezisetshenziswayo inika ukuhlolwa njengomuthi wesizukulwane esisha semithi yokulwa nesifo sikashukela sohlobo 2. Enye yezinto ezethembisa kakhulu namuhla kwakunguGlibenclamide-HB-419 eqenjini le-sulfonylurea. Abantu abangaphezu kwesigamu sabanesifo sikashukela sohlobo lwesibili bakubonile lokho.
I-Amaril yinguqulo ethuthukisiwe yeGlibenclamide, eyenziwe yathuthukisa izidingo ezintsha zokulawulwa kwalesi sifo "esimnandi."
Izici ze-pharmacological zomuthi
I-Amaryl isidakamizwa se-hypoglycemic esisiza ukulawula ushukela we-plasma. Isithako esisebenzayo somuthi yi-glimepiride. Njengomanduleli wayo, iGlibenclamide, i-Amaril nayo ivela eqenjini le-sulfonylurea, elithuthukisa ukufakwa kwe-insulin kusuka kumaseli e-b amasikebhe we-pancreatic aseLangerhans.
Ukuthola umphumela ohlosiwe, bavimba isiteshi se-potassium se-ATP ngokuzwela okwengeziwe.
Lapho i-sulfonylurea ibopha kuma-receptors akhiwe kulwelwesi lwe-b-cell, umsebenzi wesigaba se-K-AT uyashintsha.
Ukuvinjwa kweziteshi ze-calcium ngokwenyuka kwesilinganiso se-ATP / ADP ku-cytoplasm kukhuthaza ukudana kolwelwesi. Lokhu kusiza ukudedela i-calcium pathways futhi kwandise i-cytosolic calcium.
Umphumela wokukhuthazeka okunjalo kwe-exocytosis yemicwecwe e-secretory, okuyinqubo yokukhucululwa ngamaseli wamakhompiyutha phakathi kwangaphakathi, kuzokhipha i-insulin egazini.
I-Glimepiride imele isizukulwane sesithathu se-sulfonylureas. Ishukumisa ukukhishwa kwe-hormone ye-pancreatic ngokushesha, ithuthukisa ukuzwela kwe-insulin kwamaseli wamaprotheni kanye ne-lipid.
Izicubu zomzimba zithuthukisa i-glucose kakhulu zisebenzisa amaprotheni okuhambisa avela kulwelwesi lweseli. Ngohlobo lukashukela oluzimele lwe-insulin, ukuguqulwa koshukela lube izicubu kuncipha. I-Glimepiride ikhuthaza ukukhuphuka kwevolumu yamaprotheni okuhambisa futhi ithuthukise nomsebenzi wayo. Umphumela onamandla we-pancreatic usiza ukwehlisa ukumelana ne-insulin (insensitivity) kwi-hormone.
I-Amaryl ivimbela ukwakheka kwe-glucogen ngesibindi ngenxa yokwanda kwenani le-fructose-2,6-bisphosphate ene-antiaggregant (inhibition of thrombus ukwakheka), antiatherogenic (ukwehla kwezinkomba ze-cholesterol “embi”) kanye ne-antioxidant (regenerative, anti-aging). Izinqubo ze-oxidation ziyancipha ngenxa yokwanda kokuqukethwe kwe-endo native b-tocopherol nomsebenzi wama-enzymes we-antioxidant.
Ngisho nemithamo emincane ye-Amaril ithuthukisa kakhulu i-glucometer.
Ngokwakheka kwe-Amaril, isakhi esiyinhloko esisebenzayo yi-glimepiride eqenjini le-sulfonylurea. I-Povidone, i-lactose monohydrate, i-magnesium stearate, i-microcrystalline cellulose nodayi u-E172, i-E132 isetshenziswa njengama-filler.
I-Amaryl icubungula ama-enzyme wesibindi u-100%, ngakho-ke nokusetshenziswa isikhathi eside kwesidakamizwa akusongeli ukunqwabelana ngokweqile kwezitho zayo nezicubu. Njengomphumela wokucutshungulwa, kukhiqizwa izinto ezimbili ze-glipemiride: hydroxymetabolite ne-carboxymethabolite. I-metabolite yokuqala inikezwe izakhiwo zamakhemikhali ezinikeza umphumela ozinzile we-hypoglycemic.
Egazini, okuqukethwe okuphezulu kwengxenye esebenzayo kubhekwa ngemuva kwamahora amabili nesigamu. Ukuthatha i-bioavailability ngokuphelele, umuthi awubeki umkhawulo sikashukela ekukhetheni imikhiqizo yokudla "awuthatha" umuthi. Ukuqunjelwa kuzoba kunoma iyiphi indlela i-100%.
Kuvela ukuthi umuthi uhambe kancane, isilinganiso sokukhishwa kwezicubu kanye noketshezi begazi kusuka kulo muthi (imvume) ngu-48 ml / min. Ukuqedwa kwesigamu sempilo kusuka emahoreni amahlanu kuya kwayi-8.
Ukuthuthuka okubalulekile kuma-indices we-glycemic kubhekwa ngisho nangezinkinga zokusebenza nesibindi, ikakhulukazi, ebudaleni (nangaphezulu kweminyaka engama-65) kanye nokwehluleka kwesibindi, ukuqina kwengxenye esebenzayo kuyinto evamile.
Ungayisebenzisa kanjani i-Amaryl
Umuthi ukhiqizwa ngendlela yamathebulethi e-oval enomugqa ohlukanisayo, okuvumela ukuthi uhlukanise kalula umthamo ube ngama-halves. Umbala wamathebulethi uncike kumthamo: 1 mg we-glimepiride - igobolondo elipinki, 2 mg - luhlaza okotshani, 3 mg - ophuzi.
Lo mklamo awuzange ukhethwe ngengozi: uma amaphilisi angahlukaniswa ngombala, lokhu kunciphisa ubungozi bokusebenzisa ngokweqile ngengozi, ikakhulukazi ezigulini esezikhulile.
Amacwecwe ahlanganiswe emabhulini angama-15 ama-pcs. Ibhokisi ngalinye lingaba namapuleti amabili ukusuka kwayi-6.
Inkambo yokwelashwa nomuthi yinde, inama-nuances amaningi. Isibonelo, awukwazi ukweqa ukudla okulandelayo lapho uthatha umuthi.
Izici zokusebenzisa i-Amaril:
Ithebhulethi (noma ingxenye yalo) ligwinyiwe lonke, lihlanzwa ngamanzi okungenani i-150 ml. Ngokushesha ngemuva kokuphuza umuthi, udinga ukudla.
I-endocrinologist ikhetha irejimeni yokwelashwa ngokuya ngemiphumela yokuhlaziywa koketshezi begazi.
Qala inkambo ngemithamo emincane ye-Amaril. Uma ingxenye ye-1 mg ngemuva kwesikhathi esithile ingakhombisi umphumela ohleliwe, isilinganiso siyenyuka.
Umthamo ulungiswa kancane kancane, kungakapheli amasonto ayi-1-2, ukuze umzimba ube nesikhathi sokujwayela izimo ezintsha. Nsuku zonke, ungakhuphula izinga nge-1 mg. Umthamo omkhulu wesidakamizwa yi-6 mg / ngosuku. Umkhawulo ngamunye ubekwa udokotela.
Kuyadingeka ukulungisa okujwayelekile ngokushintshwa kwesisindo sikashukela noma umthamo wemithwalo yemisipha, kanye nalapho kuba nengozi ye-hypoglycemia (indlala, ukungondleki, ukusetshenziswa kabi kotshwala, izinkinga zezinso nezinsizwa).
Isikhathi sokusebenzisa nomthamo kuzoncika kusigqi sokuphila kanye nezimpawu zokusebenzisa umzimba. Imvamisa, ukuphathwa okukodwa kwe-Amaril kunqunywa ngosuku ngokuhlanganiswa okuphoqelekile nokudla. Uma ibhulakufesi ligcwele, ungaphuza iphilisi ekuseni, uma lingokomfanekiso - kungcono ukuhlanganisa ukwamukela nelebhulakufesi.
I-overdose isongela nge-hypoglycemia, lapho ushukela osentabeni wehla uye ku-3.5 mol / L noma ngaphansi. Isimo ungaqhubeka isikhathi eside impela: kusuka emahoreni ayi-12 kuye ezinsukwini ezi-3.
Amathebhulethi e-Amaryl (kwiphakethe lezingcezu ezingama-30) athengiswa ngentengo:
260 rub - 1 mg,
500 rub - 2 mg ngamunye
770 rub - 3 mg ngamunye
I-1020 rub. - 4 mg ngamunye.
Okuhle nezinzuzo zamathebulethi e-Amaril: bathini ngaye ngokubuyekezwa nokuthi bawusebenzisa kanjani umuthi?
Abantu abaningi banesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, minyaka yonke isibalo sabantu abahlaselwa yilesi sifo sikhula kuphela.
Akunakwenzeka ukwelapha ukugula okunjalo, noma kunjalo, kungenzeka ukuyilawula futhi ugcine isimo esijwayelekile somzimba.
Ukuze wenze lokhu, khiqiza izidakamizwa ezahlukahlukene, esinye kuzo yi-Amaryl. Ukubuyekezwa okuthatha lesi sidakamizwa kuvame ukuthi kube okuhle. Into esemqoka ukugcina umthamo nesikhathi sokuphatha. Funda kabanzi ngomuthi okule ndatshana.
Ukwakheka komuthi, ifomu lokukhulula
I-Amaryl ikhiqizwa ngendlela yamathebulethi, angaba nomthamo ohlukile, okungukuthi 1, 2, 3, 4 mg.
Umuthi osebenzayo lapha yi-glimepiride, futhi izinto ezisizayo zifaka i-lactose monohydrate, i-magnesium stearate, i-microcrystalline cellulose, udayi i-E132 ne-E172, i-povidone.
Ithebhulethi ngayinye inomugqa ohlukanisayo, kanye nokukhipha. Iphakethe lelo liqukethe amabhulashi amabili lapho kukhona khona amaphilisi ayi-15.
Amathebhulethi omthamo ahlukene kulula ukuwahlukanisa ngenxa yemibala yawo ehlukile. Amathebulethi anento esebenzayo i-1 mg epinki, 2 mg eluhlaza, 3 mg ophuzi, 4 mg oluhlaza okwesibhakabhaka.
Ukubuyekezwa mayelana nesidakamizwa Amaryl
Mayelana ne-Amaril yezidakamizwa, ukubuyekezwa kwabanesifo sikashukela kulungile. Iziguli ezithatha i-Amaryl zikholelwa ukuthi lesi sidakamizwa silwa ngempumelelo noshukela ophezulu kuhlobo 2 sikashukela.
Into esemqoka ukukhetha isilinganiso esifanele somuthi. Uhlangothi oluhle futhi umbala ohlukile wezibhebhe, ezisetshenziselwa imithamo ehlukene. Lokhu kukuvumela ukuthi ungadidanisi okulungile.
Kodwa-ke, kunokubuyekezwa okuningi okungahambi kahle, okuhambisana kakhulu nokuvela kaningi kwemiphumela emibi, njengokuthuthumela, ubuthakathaka, isiyezi, ukuthuthumela emzimbeni, ukwanda kwesifiso sokudla. Kunezimo ze-hypoglycemia, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuphatha amaswidi noma eminye imikhiqizo equkethe ushukela omkhulu.
Ukubuyekezwa okungalungile nakho kungazwakala kusuka kubashayeli abathatha i-Amaryl. Umuthi uthinta uhlelo lwezinzwa, ngakho-ke ukusabela kuyancipha, okuyingozi impela lapho ushayela. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokuphumelela kwomuthi, izindleko zawo ziphakeme kakhulu kune-analogues.
Ukubuyekezwa kwezidakamizwa ze-Amaril:
Ngakho-ke, isifo sikashukela ngaso sonke isikhathi asibangeli ukuphazamiseka okuningi kanye nokungaphatheki kahle. Izidakamizwa zohlobo lwe-Amaril zingaligcina kalula ushukela ojwayelekile.
I-Amaryl yesifo sikashukela
I-Amaril inqunywe yi-endocrinologist enoshukela wegazi ophakeme, futhi itholakala nesifo sikashukela sohlobo 2.
Ngokwakheka kwenani elihlukile le-glimepiride:
Amacwecwe apinki aqukethe i-1 g yesithako esisebenzayo,
Imifino - 2 g,
Ophuzi - 3g,
Oluhlaza okwesibhakabhaka - 4 g
Ngaphezu kwalokho, ukumaka kufakwa emaphaketheni. Ngaphezu kwe-glimepiroid, ukwakheka kuqukethe inani elingelutho le-lactose, isitashi se-sodium, i-microcrystalline cellulose ne-polyvidion, kanye nodayi ohambelana nokulebhelana nomuthi.
Zonke izinto ezikulesi sakhiwo zilungele ukusetshenziswa kohlobo lweshukela sikashukela ku-2 imithamo lapho zikuqukethwe kwithebhulethi.
Ifomu lokukhipha lingamacwecwe, igama lomhlaba wonke yiGrimepiride, intengo ye-Amaril iqala kusuka kuma-ruble ayi-617.
Lesi isidakamizwa "esiphindwe kabili":
Ivuselela ukukhiqizwa kwe-insulin yakho ngokwama-pancreas.
Yehlisa ukumelana ne-insulin futhi ibuye ivume ukuthathwa koshukela yizicubu.
I-Amaryl yakhelwe njengenye indlela yezidakamizwa ezingabizi kakhulu ezinobungozi obukhulu be-hypoglycemia. Ngenxa yento esebenzayo, ivumela amanyikwe ukuthi akhiqize i-insulin ngemithamo emincane. Ingozi inyuka ngomthamo ongalungile, noma umthamo omkhulu kakhulu womuthi.
I-Amaryl ine-antithrombotic kanye ne-antacidosis effect, ivimba i-neoglucogeneis esibindini, futhi ilungisa i-lipogenesis ne-glycogeneis.
I-Amaryl inyusa umphumela wazo zonke izidakamizwa ezisehlisa ushukela. Akunconyelwe ukwengeza noma yiziphi izithasiselo zokudla zesenzo esifanayo necebo lokwelashwa ngokwakho.
I-Amaril ithuthukiswa ama-anabolic steroid, ama-inhibitors we-MAO, i-fluoxetine, ama-tetracyclines nama-sulfonamides, kanye ne-phenfluramine.
Yehlisa ukusebenza kwe-laxatives yezidakamizwa, ama-sorbyt ahlukahlukene, ama-hormone we-thyroid, i-adrenaline, i-glucagon ne-thiazide diuretics.
Akukho lwazi olususelwa kwesayensi kubhiya olungeyona utshwala ne-Amaril.
Ukuxhumana kokusetshenziswa kotshwala kubangelwa ukuthi i-Amaril ithuthukisa umphumela onobuthi esibindini, futhi ingavusa izilonda zesisu nokuphuma kwegazi. Uma kwenzeka isiyezi, i-tinnitus kanye nezinye izimpawu zobuthi ngemuva kokuphuza utshwala, babiza i-ambulensi, bageze isisu, bathathe izangoma, bese belandela uhlelo lokwelashwa.
Ungawunciphisa kanjani umthamo futhi ukhansele umuthi
Ukunciphisa umthamo akuvunyelwe. Udokotela kufanele ahlaziye ukuguquguquka kwamazinga kashukela egazini, enze ucwaningo lwamanyikwe, futhi anake yonke imingcele yezempilo yesiguli.
Ukuhoxa kweziguli akufanele kwenziwe kunoma yikuphi. Ukuncishiswa komthamo, ukukhethwa kwezinye izidakamizwa - kuphela ngokuya ngemiyalo kadokotela oholayo.